Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Filibiin News » Dhulgariir Xoog leh oo ruxay Filibiin
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Filibiin News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Intii lagu jiray 7 -dii maalmood ee la soo dhaafay, Filibiin waxaa ruxay 1 dhulgariir oo cabbirkiisu ahaa 7.0, 1 dhulgariir cabbirkiisu ahaa 5.1, 5 dhulgariir oo u dhexeeya 4.0 iyo 5.0, 35 dhulgariir oo u dhexeeya 3.0 iyo 4.0, iyo 187 dhulgariir oo u dhexeeya 2.0 iyo 3.0
Maya arrimaha Digniinta Sunaami
Dhulgariirkii xoogganaa ee Filibiin ayaa dhacay subaxnimadii hore ee Khamiista.
Dhulgariirku wuxuu ahaa inuu si weyn u dareemo qof kasta oo ku sugan aagga xuddunta.
Masuuliyiinta Filibiin ayaan weli soo saarin digniin tsunami oo ku aadan dhulgariirka maanta
Dhulgariir xooggan oo cabbirkiisu yahay 7.1 ayaa ku dhuftay badda Filibiin, 74 kiiloomitir (46 mayl) koonfur -galbeed Mati, Filibiin maanta.
Dhulgariirku wuxuu ku dhuftay subaxnimadii hore ee Khamiista, Ogosto 12, 2021 saacaddu markay ahayd 1:46 am (GMT +8) xilliga hoose oo ah qoto dheer oo 10 km ah.
Iyadoo lagu saleynayo xogta hordhaca ah ee dhulgariirka, waxay ahayd in dhul gariirka uu si weyn u dareemo ku dhawaad ​​qof kasta oo ku sugan aagga xuddunta. Waxaa laga yaabaa inay sababtay dhaawac fudud oo dhexdhexaad ah.
Gariir dhexdhexaad ah ayaa laga yaabaa inuu ka dhacay Bobon (pop. 4,500) oo 64 km u jirta xuddunta, Tibanbang (pop. 7,800) 77 km, Mati (pop. 105,900) 79 km, Manay (pop. 20,300) 80 km, Sigaboy ( pop. 8,000) 81 km, iyo San Isidro (pop. 9,700) 85 km.
Lupon (pop. 27,200) oo ku yaal 96 km u jirta xuddunta, Davao City (pop. 1,212,500) 144 km, Magugpo Poblacion (pop. 233,300) 149 km, iyo Panabo (pop. 84,700) 150 km, dhulgariirku waa inuu ahaadaa ayaa la dareemay sida gariir fudud.
Ma jiraan warar degdeg ah oo sheegaya khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba. Wax digniin tsunami ah lama bixin ilaa hadda.
7dii maalmood ee la soo dhaafay, Filibiin waxaa ruxay 1 dhulgariir oo cabbirkiisu ahaa 7.0, 1 dhulgariir oo ahaa 5.1, 5 dhulgariir oo u dhexeeya 4.0 iyo 5.0, 35 gariir oo u dhexeeya 3.0 iyo 4.0, iyo 187 dhulgariir oo u dhexeeya 2.0 iyo 3.0.
Waxa kale oo jiray 56 dhulgariir oo ka hooseeyay baaxadda 2.0 oo aan dadku sida caadiga ah dareemin.